Vaovao - Fandehanana mandritra ny Krismasy: Ity no tokony holazain'ny olona iray vao voan'ny aretina.
Quarantine mandritra ny Krismasy: Ity no tokony holazain'ny olona vao voan'ny aretina.
Any Etazonia, olona an'aliny no tsy handany fialan-tsasatra miaraka amin'ny fianakaviany, fa hogadraina aorian'ny fifanarahana Covid-19 mandritra ny firongatry ny variana omicron amin'ny coronavirus.
Ny mpahay siansa ao amin'ny Oniversiten'i Kalifornia, San Francisco dia nanamafy tamin'ny 1 Desambra fa nahita ity mutation tena areti-mifindra ity tamin'ny marary iray any California.Ity no marary voalohany toy izany eto amin'ny firenena.Tamin'ity herinandro ity, ny otrikaretina dia hita tany amin'ny fanjakana 50 rehetra, manelingelina ny drafitry ny fanangonana ireo marary Covid tsy tambo isaina sy ny fianakaviany.
Ity variana ity dia niteraka fiakaran'ny tranga tany Etazonia, nanosika ny salan'isa 7 andro tamin'ity herinandro ity ho 167,683 tranga, izay ambony noho ny tampon'ny variana delta tamin'ny fiandohan'ny volana septambra.
"Raha fantatro dia tsy handeha amin'ny lanonana Krismasy na trano fisotroana aho," hoy i Charlotte Wynn, 24 taona, mpanolo-tsaina iray any Boston ambanivohitra izay nahitana fitsapana tsara vao haingana. "Raha tsy afaka mandany Krismasy miaraka amin'ny fianakavianao ianao, dia ireto tsy misy dikany amin'ny ankapobeny ny zavatra ao amin'ny drafitra lehibe. "
Emily Maldonado, 27 taona, avy any New York City, dia miandry ny fitsidihan-dreniny avy any Texas amin'ity faran'ny herinandro ity. Maldonado dia nikasa ny hanaitra azy amin'ny tapakila, avelao izy hijery ny Radio City Rockets ary hiara-mankalaza ny fialantsasatra taorian'ny areti-mifindra mafy. izay namoy ny telo tamin'izy ireo noho ny Covid-19.Havana.
"Amin'ny ankapobeny, taona maro izay, ary amin'ny farany dia tena mila ny reniko aho hamarana izany," hoy i Maldonado.
Albert R. Lee, 45 taona, mpampianatra mpanampy ao amin'ny departemantan'ny mozika ao amin'ny Oniversiten'i Yale, dia nilaza fa taorian'ny fitsapana tsara ho an'ny coronavirus vaovao tamin'ny talata alina dia natahotra ny fivoriam-pianakaviana izy. Krismasy, saingy manahy izy sao ny reniny dia mety hiaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany tsy vita vaksiny.
"Eo amin'ny faha-70 taonany ny reniko, ary te hiaro azy fotsiny aho," hoy i Li, izay nilaza fa mikasa ny hiresaka aminy izy mba hiresaka momba ny famerana ny fivoriam-be amin'ny olona izay mandray anjara amin'ny vaksiny sy fampiroboroboana amin'ny Krismasy.
James Nakajima, lehilahy britanika 27 taona mipetraka any New York, dia nilaza fa taorian'ny nahitana azy sy ny mpiray efitra taminy vao haingana tamin'ny viriosy satroboninahitra vaovao, dia velom-pankasitrahana izy fa nahazo tsindrona booster.
Hoy izy: “Talohan’ny nahafantarana ahy, dia nisondrotra aho ary tsy nisy soritr’aretina.”"Mifanohitra tanteraka amin'ny mpiray efitra amiko izay tsy mbola nahazo booster.Narary andro vitsivitsy izy.Anekdota ity.Saingy heveriko fa miaro ahy izany. ”
Nanambara i Nakajima fa nanemotra ny drafitry ny diany izy mandra-pahatongan'ny faran'ny vanim-potoanan'ny confinement ary manantena ny handika ny fomban'ny Krismasy ao anatin'ny andro vitsivitsy.
“Rehefa tena manidina miverina aho dia handeha an-tongotra miaraka amin'ny fianakaviana sambatra ary hiara-misakafo izahay,” hoy izy. “Miezaka ny miandrandra aho ary tsy variana loatra amin'ny tsy fisian'ny Krismasy."
Nifindra tany Etazonia avy any Vietnam i Tri Tran, 25 taona, tamin’izy 11 taona. Tsy nankalaza Krismasy izy rehefa lehibe.Tena faly tokoa izy tamin'ny voalohany niaina ity fialantsasatra ity.
“Tsy manana fomban-drazana Krismasy aho, fa mikasa ny handeha any St. Louis miaraka amin'ny namako mba hankalaza Krismasy miaraka amin'ny fianakaviany aho,” hoy izy.
Ho an'ny olona maro, nandritra ny fialan-tsasatra mahakivy, dia nilaza i Li fa miezaka mitazona toe-tsaina tsara izy.
“Manelingelina izany.Mahasorena izany.Tsy drafitray izany,” hoy izy.Inona izany.
Hoy izy: "Te-hiaritra fotsiny aho ary hijanona ho tsara, manantena ary hivavaka ho an'ireo izay mety tsy nanao vaksiny ary miatrika ny fiantraikan'ny viriosy."
Fotoana fandefasana: Dec-24-2021